Ny fitantanana fako COVID tsy mety dia mety hampiitatra ny fihanaky ny virus
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny fitantanana fako COVID tsy mety dia mety hampiitatra ny fihanaky ny virus
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
COVID fitantanana fako
Tao amin'ny National Center for Biotechnology Information (NCBI) fanadihadiana natao tany Etazonia momba ny fiantraikan'ny valanaretina COVID-19 amin'ny fitantanana ny fako.
Ny areti-mandringana COVID-19 dia voalaza fa nampihena ny fandotoana ny rivotra sy ny tabataban'ny tontolo iainana ary nanatsara ny tontolo voajanahary sy ny fizahantany.
Saingy mampivarahontsana ny fiantraikan'ny fijanonana ao an-trano sy ny fepetra fisorohana ny fitantanana ny fako.
Ny tsy fitantanana araka ny tokony ho izy ny fako azo avy amin'ny tobim-pahasalamana sy ny tokantrano dia mety hampitombo ny fiparitahan'ny COVID-19.
Noho ny fitahirizana fonon-tànana, akanjo, sarontava ary fitafiana sy fitaovam-piarovana hafa dia toa nisy tampoka ny fako noho ny famokarana fako tsy fahita avy amin'ny tokantrano sy tobim-pahasalamana. Ny tsy fahaiza-mitantana araka ny tokony ho izy ny fako nateraky ny tobim-pahasalamana sy ny tokantrano dia mety hitombo ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny fandefasana faharoa.
Ny fanariana fatratra, ny fandoroana misokatra ary ny fandoroana olona dia mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny rivotra sy ny vokatra ara-pahasalamana noho ny fihanaky ny poizina. Noho izany, misy ny fanamby amin'ny fitantanana ireo fako tsy mahazatra amin'ny fampiasana maharitra ny fako misy ary mampihena ny fandotoana ny rivotra, misoroka ny fifindranà virus faharoa, ary ny fanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana.
Ny fako Hazmat dia mizara ho kitapo mena ho mora fantarina sy hanariana am-pitandremana any Pattaya.
Pattaya rendrika tao anaty antontan-javatra fako mampidi-doza COVID-19
Miaraka amin'ny mponina Pattaya efa ho 20,000 na any amin'ny hopitaly na mitokana any an-trano, ny olana amin'ny fako mampidi-doza ao an-tanàna dia mitombo haingana kokoa noho ny trangan'aretina coronavirus.
Ny ben'ny tanàna lefitra Manote Nongyai dia nilaza fa misaron-tava mihoatra ny 7 taonina isan'andro, fitaovam-piarovan-tena, tavy ary fako tsy dia mahazatra loatra ampiasain'ny marary izao. Raha ampitahaina amin'ny fako hazmat 800 kilao alohan'ny nipoahan'ny onja fahatelo an'ny coronavirus tao Chonburi.
Misy antony 2 lehibe mahatonga ny antontam-bato. Ny voalohany dia ny isan'ny olona ao anatin'ny karazana fitsaboana na karokantin: 18,942 ao Chonburi rehetra hatramin'ny Alarobia. Ny provansy koa dia nitatitra tranga vaovao 974, isan'izany ny 147 ao amin'ny Distrikan'i Banglamung, izay ahitana an'i Pattaya.
Ny antony faharoa dia ny fenitra mazoto nampiasain'ny governemanta hanasokajiana zavatra iray ho "hazmat". Amin'ny ankapobeny, izay rehetra kasihan'ny olona izay nanaporofo fa miabo amin'ny COVID-19 - na famantarana izany na tsia - dia takiana anaty harona plastika mena ary hokarakaraina manokana sy hatsipy. Anisan'izany ireo zavatra mahazatra toy ny siny mafana mafana na sombin-taratasy.
Betsaka ny vola vidiana amin'ireo harona mena ireo. Ny mpitrandraka fako any Pattaya, Eastern Green World Co., dia mitentina 1.5 baht isaky ny kilao amin'ny fako mahazatra. Ny fako mifindra kosa dia 24 baht iray kilao no esorina.
Izany dia nanjary “mpitsangatsangana” - trano fandraisam-bahiny niova fo izay mikarakara ireo marary coronavirus malemy fanahy - mba hanalokaloka ny fako hananany ganagana handoa ny sarany. Ny Cholchan Pattaya Beach Resort dia tratra tamin'ny fiandohan'ity volana ity namonosana ny kitapo hazmat mena tao anaty kitapo mainty mahazatra.
Manote dia nilaza fa i Pattaya dia nanao outsourcing ny fanangonana hazmat fa tsy mampiasa ny tontolo maintso atsinanana, saingy io orinasa tsy fantatra anarana io dia tsy nahatanty ny fiakaran'ny harona mena. Ka ireo mpiasan'ny Green Green Atsinanana dia nofanina tamin'ny fomba fitantanana ny fako mampidi-doza mba hahafahan'izy ireo manangona fako coronavirus koa.
Nilaza i Manote fa zava-dehibe ny fanangonana ny kitapo hazmaty ao anatin'ny herinandro iray, noho izany mila orinasa mihoatra ny iray ny fanatanterahana izany.
Nanamafy ihany koa ny lefitra lefitra fa mila mailo hatrany ny vahoaka amin'ny fandaminana ny fako ka izay mampiasa quarantine na mitokana ao an-trano dia mampiasa kitapo hazmat mena ihany koa.